Sale is the backbone of your business! - Sales Training Programs by Charisma
လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက် sales team ရဲ့နေရာဟာ သိပ်ကိုအရေးပါ,ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ တချို့ လူတွေအတွက် အငြင်းပွားစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အတွက် မောင်းနှင်အားဟာ ဝင်ငွေ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ရောင်းအားဆိုတာ ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ရောင်းအား/ဝင်ငွေမရှိပဲ ဘယ်စီးပွားရေးမှ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် company တစ်ခုရဲ့ ရောင်းအားနဲ့ ဝင်ငွေဟာ မိမိရောင်းနေတဲ့ ထုတ်ကုန် (product) သို့ ဝန်ဆောင်မှု (service) ကောင်းခြင်း/မကောင်းခြင်းနှင့်လည်း တိုက်ရိုက်အချိုးကျလို့နေတဲ့အပြင် လုပ်ငန်းကောင်းကောင်း လည်ပတ်နိုင်လား (သို့) တိုးချဲ့နိုင်သလားဆိုတာကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ ပေတံတစ်မျိုးပါပဲ။
Business Owners and Entrepreneurs တိုင်းတာ Sales အပေါ် အလေးထားကြပါတယ်။ မှတ်တမ်းတစ်ခုအရ US က companies တွေဟာ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်က အရောင်းသမားတွေအတွက် sales training တွေချည်းပဲကို နှစ်စဉ် $5 Billions လောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဘာသွားမြင်လည်းဆိုတော့ အပြိုင်အဆိုင် အရမ်းများတဲ့ ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလောကမှာ မိမိလုပ်ငန်းခွင်က အရောင်းသမားတွေအပေါ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း (သို့) superhero အရောင်းသမားတွေကို လစာကောင်းကောင်း၊commission ကောင်းကောင်းနဲ့ ခန့်ထားနိုင်ခြင်းဟာလည်း ပြိုင်ဖက်တွေထက် နှာတစ်ဖျားသာစေမယ့် ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ….။
ဒီနေ့ခေတ် စီးပွားရေးရဲ့ သဘောကိုက get big or get out ပါ (ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို သီးသန့်ရေးပါဦးမယ်) ဒီတော့ လုပ်ငန်းကြီးထွားအောင် လုပ်မလား? ဒါမှမဟုတ် အရှုံးပေးပြီး ထွက်သွားမလား။
ဒီတော့ ပိုကောင်းပိုတော်တဲ့ အရောင်းသမားတွေ လိုလာပြီ။
ပိုကောင်းတဲ့ အရောင်းသမားဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရောင်းသမားတစ်ယောက်အတွက် တွန်းအားတစ်ခုလိုပါတယ်။ ငွေကြေးက ကိုယ့်အတွက် တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သလား (ကိုယ့်လုပ်အား ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ရလာမယ့် commission or bonus ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်) အဲဒါဆိုရင်တော့ ငွေကြေးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မက်ရပါမယ်။ ငွေကြေးသည် အရာအားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် ငွေကြေးပြည့်စုံလာရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး၊လူနေမှုနဲ့ ကိုယ့် မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(ငွေကြေးသည် ကိုယ့်အတွက် တွန်းအားမဖြစ်စေခဲ့ဖူးဆိုရင် တခြားဘယ်လိုအရာတွေက ကိုယ့်ကို အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်စေမလဲ ရှာဖွေပါ)
ဒါပေမယ့် သစ်ပင်တစ်ပင်တည်းနဲ့ တောအုပ်မဖြစ်သလိုပဲ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကို မျှော်ကိုးပြီးအလုပ်လုပ်နေရင်တော့ အရောင်းသမားကောင်းဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကြေးချည်းပဲ မျှော်ကိုးပြီး အလုပ်လုပ်နေရင် လောဘတက်လာပြီး ဖောက်သည်တွေကို ကူညီရကောင်းမှန်းမသိ ရောင်းရပြီးရောဆိုပြီး ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီနဲ့ အရောင်းသမားဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တခြား ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ skills တွေအပြင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ချစ်ရမှာဖြစ်သလို အထာလေးတွေနပ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ မဟုတ်ရင် pipeline တွေ၊ quota တွေ၊ KPI တွေ၊ sales volume တွေကြားထဲမှာ ရှင်သန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Sales Superhero တစ်ယောက်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြိုင်ဖက်ကင်း အရောင်းသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Networking aka finding contacts
အားလုံးထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ရှည်ဖို့နှင့် အရေထူဖို့လိုပါတယ် (ဘာလို့လည်းဆိုတော့ NO တွေအများကြီးကို ခါးသီးစွာ ကျော်ဖြတ်ရမှာ မလွဲမသွေပါပဲ)။ ပြီးတော့ တော်တော်များများ မှားနေတဲ့အချက်က အရောင်းသမားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ တော်ကီကောင်းရမယ်၊ customer နဲ့တွေ့ရင် ကရားရေလွှတ် ပြောမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ တိုးတက်လာတဲ့ B2B ဈေးရောင်းခြင်းအနုပညာမှာ ၁၀၀% မမှန်တော့တဲ့ logic တစ်ခုပါ၊ မိမိဟာ Product ဖြစ်ဖြစ် service ဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲရောင်းရောင်း listening skill ဟာ အများကြီး အရေးပါ,ပါတယ်၊ နားထောင်တဲ့နေရာမှာလည်း သာမန်ကာလျှံကာ နားထောင်ခြင်းထက် တကယ်ကို စိတ်ပါလက်ပါ နှလုံးသားနဲ့ နားထောင်နိုင်မှလည်း ကိုယ်သည် customer ရဲ့ requirements (လိုအပ်ချက်)နဲ့ ဒုက္ခ (pain) တွေကို နားလည်ပြီး သူနဲ့ ကိုက်ညီမယ့်ဟာကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။